घर युरोपियन स्टार तर, उनीहरुसँग भेटघाट हुन सकेनन्
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "Mitro"। हाम्रो Aleksandar Mitrovic बचपन कथा plus untold जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु भएको घटनाको पूर्ण खाता तपाईंको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो लक्ष्य क्षमताहरू बारे जान्नुहुन्छ। तर केवल केहि केहि Aleksandar Mitrovic को जैव को विचार मा एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
Aleksandar Mitrovic सितंबर 16 को 1994th मा आफ्नो आमा, नतिशा Mitrović, र पिता, आइका मित्रोमी को Smederevo सर्बिया, स्लोवाकिया पूर्व यूगोस्लाविया मा जन्म भएको थियो।
मित्सोभिक भाइ भाइले हालै सर्डरेरेवो, पूर्वी सर्बिया शहरमा आफ्नो एजेन्सी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै सुरूवातबाट, मितोभिक परिवारले प्रशंसा गरेको नयाँ क्यासल प्रशंसकहरू छन् एलन शेरर। अधिक व्यक्तिगत जमीन मा, मिभोविक आफ्नो प्रारंभिक दिनों को समयमा बाहिर जाने, सामाजिक रूप देखि आत्मविश्वास र जिद्दी थियो। उहाँले एक पटक बढ्दै गरेको कुरा सम्झनु भएको थियो र उनीहरूलाई एक हुन सकियो आपराधिक वा एक किकबक्सर उनको पिता द्वारा। तिनका शब्दहरूमा
जब उनको शुरुवात जीवनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ टेलीग्राफ त्यो फुटबल बिना के गरिरहेको छ। Mitrovic एक पटक जवाफ दिए; ...
मलाई थाहा छैन यदि म फुटबल खेल्दैन भने म के गर्छु। शायद केहि चीजहरू जहाँ म मेरो एड्रेनालिन प्रयोग गर्न सक्दिन। शायद बक्सिंग जस्तै केहि।
म बच्चाभाइमा मितोभिकको धेरै ऊर्जा थियो। बढ्दै गयो, उहाँका आमाबाबुले आफ्नो व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो थियो। यो फुटबलमा उनीहरूको सहभागिता थियो जसले उनलाई बच्चाको रूपमा बनाएको गरीब छनोटहरूबाट टाढा टाढा।
तर, क्यारियर बिल्डअप
एक बच्चाको रूपमा मितोविक मानिन्छ कि उनी केवल फुटबलर हुदैनन् तर न्यूकैसलमा खेल्न र रिटायर गर्न चाहन्थे। त्यसपछि एक बच्चाको रूपमा, उनले न्यूकैसल जर्सीको एक जोडीको स्वामित्व लिइन्। तिनका शब्दहरूमा
सर्बियामा एक सानो केटा थियो जब नयाँ क्यासल मेरो मनपर्ने क्लब भएको छ। मैले न्यूकैसल मेरो सम्पूर्ण जीवन पछ्याएको छु। जब म सानो हुन्थ्यो मेरो दुई नयाँ क्यासल शर्ट थियो। यो असामान्य थियो, अधिकतर मानिसहरूले म्यान्चेस्टर युनाइटेड वा बार्सिलोना जस्ता टोली छनौट गर्छन्, तर मेरो लागि, यो सधैँ नयाँ क्यासल हो।
फुटबलको लागि मित्रोको प्रेमले उनलाई 2005 मा एक स्थानीय सर्बिया युवा युवा दलजजनको रोस्टरमा भर्ना गरेको थियो जसले उनलाई आफ्नो क्यारियर किकस्टार्ट गर्न र उनको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न चरणबद्ध गरे।
एक सफल जवान क्यारियर 2011 मा अन्त भयो, त्यो वर्ष टेलिपिटिक मा ऋण जादू पछि पेशेवर भयो। फर्केर फर्किएपछि उहाँ फुटबल खेलाडी हुनुभयो। मितोभिकले आफ्नो टोलीलाई सिजन सर्बलिगालाई आफ्नो पहिलो सिजनमा जित्नको लागि नेतृत्व गरे।
18 को उमेर मा, Mitrović युरोप मा 10 उमेर को तहत शीर्ष 19 प्रतिभा को बीच मा नाम को चयन गरे यूईएफए पत्रकारहरू। यो अद्भुत विशेषताले युरोपियन क्लबहरूमा स्काउट्सलाई आकर्षित गर्यो। वार्तालाप पछि, मितोले अन्ततः बेल्जियममा सामेल हुनुभयो एन्डरलेच जहाँ उनी 44 खेलहरूमा 90 लक्ष्यहरू गोल गर्न र दोस्रो सेकेन्डमा लीग शीर्ष स्क्यानर जित्थे।
यो विशेषताले उनको प्रमुख लेग सपने क्लब, न्यूकासलले जसले 2015 मा हासिल गर्यो। एक ठाउमा पछि Rafa Benitez 2018 मा, मित्रो ले आफ्नो बचपन क्लब संग समाप्त भएको थियो उनको समय निर्णय गर्यो। प्रतिक्रियामा, उनले उत्तर पूर्व क्लबबाट ऋण लिने अनुरोध गरे। पश्चिम लन्डनमा फुलहम उनको गन्तव्य हो। तिनका शब्दहरूमा
मलाई न्यूकास्टल छोड्न आवश्यक छ किनकी मलाई खेलको समय चाहिन्छ र मेरो खुट्टामा गेम चाहिन्छ। म फुटबल खेल्न थालें, पिचमा हुन, गोल स्कोर गर्न।
उहाँले XNumX मा प्रिमियर लिगमा पदोन्नति गर्न मद्दत गर्न उनीहरूलाई फुलहम स्थायी रूपमा स्थायी रूपमा सामेल हुनुभयो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक सफल सर्बिया फुटबलर (हेर्नुहोस् Nemanja Matić), त्यहाँ एक ग्लैमरस वाग वा प्रेमिका हो जुन क्रिस्ट्याण्डको नाममा देखाइएको छ, जसको जीवनको प्रेमले चित्रण गर्दछ।
उनको साझेदार क्रिस्टिना संग, मित्रोकी को एक पुत्र छ, जसको नाम लूका र एक छोरी हो जसको नाम अज्ञात छ।
एक शक बिना, Mitrovic को हिसाब क्षमता, साथ नै उनको स्वस्थ परिवार जीवन शैली उसलाई एक पूर्ण चित्र बनाउँछ।
तर, ताप टेपर
बाकस र हवाई जहाज मा Mitrovic को भौतिक उपस्थिति केवल उनको ज्वलंत र अप्रत्याशित स्वभाव द्वारा मेल खा सकते हो जो कि Zinedine Zidane। मितोभिकले आफुलाई हेड-बटाउने विरोधका लागि प्रसिद्ध छ।
मई 2014 मा कुख्यात घटना भयो, जब Anderlecht स्टारले क्लब ब्रुग केन्द्र फिर्ता Bjorn इन्गल्स फिर्ता आक्रमण गरे र यो विधिवत पठाइएको थियो। तल हेर्नुहोस् भिडियो;
यो फुटबल प्रशंसकको बहुमत मिथ्रोभिकको तापक्रमको बारेमा थाह छ कि अचम्मलाग्दो थिएन, जसले उनलाई पछिल्लो अन्डरलेचट र सर्बियामा क्लबको राम्रो नाम कमाएको छ। मितोभिकले बेल्जियम पत्रकारिताको रूपमा वर्णन गरेको छ जसको तुलनामा वाइल्डकार्ड व्यक्तित्वले तुलना गर्न सक्छ मारियो बाल्टोटेल सामान्य हेर्नुहोस्।
तर, लक्ष्य उत्सव विवाद
मितोभिकको उत्सव (माथि चित्रित) को लागी कुनै विवरण को आवश्यकता छैन जुन मानिसहरूले यसको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यद्यपि मितोविकले आफैंलाई इन्कार गरेकी थिईन् यो गुजरात सेकेन्ड ** सन्दर्भ हो।
बरु, सर्बियन फर्जीले दावी गरे कि उसले आफ्नो जिब्रोलाई फ्याँक्यो र उनको दुई औंलाहरू दुवै तिर हिड्छ किनकी उसले मोप्च्याउँदैछ "आफ्नो आलोचकहरूको जीभ काटेर".
तर, अर्को Zlatan
के तपाईलाई थाहा छ? ... मितोभिक डब गरिएको छ "अर्को Zlatan Ibrahimovic"उहाँ आफ्नो रगतबाट आउनुभयो।
दुई कारणहरू अवस्थित छन् किन मितोभिकलाई "अर्को Zlatan Ibrahimovic"उहाँको प्रारम्भिक उमेरबाट। सबै भन्दा पहिले, Ibrahimovic जन्म भएको थियो र स्वीडेनमा जन्मेका तथापि, उनको परिवार धेरै वर्ष पहिले युगोस्लाभियाको पूर्व राष्ट्रबाट उत्तरी यूरोपबाट हटाइयो। मितोभिक पूर्व राष्ट्रको एउटै क्षेत्र पनि हो जुन यसको समान विशेषताको लागि जानिन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Aleksandar Mitrovic बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
साथीहरुसँग मिलेर पढ्नका लागि
अप्रिल 9, 2018